Madaxweynaha Itoobiya oo ku baaqay in la xoojiyo amniga dalkiisa iyo kuwa deriska la ah. | Baydhabo Online
Madaxweynaha Itoobiya oo ku baaqay in la xoojiyo amniga dalkiisa iyo kuwa deriska la ah.
Madaxweynaha dalka Itoobiya Mulatu Teshome,ayaa u baaqay in la xoojiyo amniga gudaha dalka Itoobiya iyo waddamnada deriska la ah dalkiisa.
Mr Mulatu Teshome oo ka hadlayay xuska maalinta difaaca Ciidanka Itoobiya oo shalay ku beegneyd kana dhacday Magaalada Jigjiga,ayaa ciidamada dalkiisa ugu baaqya in ay markasta digtoonaadaan kana fiignaadaan cadowga qorsheynaya dhibaateynta Itoobiya.
Waxaa uu sidoo kale Ciidanka Dalkiisa qaarkood guddoonsiiyay billado geesinmo ah kaddib markii sida munaasibadda laga sheegay ay la dagaallameen Al-shabaab.
Madaxweyne Mulatu,ayaa si gaar ah u amaanay billadana u gudoonsiiyay guutada 13aad ee Ciidanka Itoobiya kuwaas oo mar Al-shabaab kula dagaalamay Tuulada Halgan ee Gobolka Hiiraan,markaas oo ay Itoobiya sheegtay in ay ka dkaatay Al-shabaab kana furatay hub aad u fara badan.
Taliyaha guud ee Ciidanka Difaaca Itoobiya Samora Yenus ,ayaa sheegay in kaliya dastuurka dalkaasi ay jjibinayaan markii uu qal qal galo amniga gudaha iyo dibadda ee Itoobiya,taasna ay tusaale u tahay xaaladda deg degga ah ee la geliyay Itoobiya Bishii Octoober kaddib markii loo yaabay amniga gudaha Itoobiya rabshado ay kiciyeen Qowmiyadaha Oromada iyo Amxaarada ee dalkaas dega.
Ciidanka Itoobiya waxaa ay ka dagaallamaan dalalka deriska la ah Itoobiya sida Soomaaliya iyo Koofurta Suudaan,waxaana ay xubin muuqata ka yihiin howlgallada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika.